Walking – Healthy Life Journal
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. တချို့လူတွေမှာ လမ်းလျှောက်ရင်း ခါးက ကုန်းကုန်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ ဆရာ။ ဖြေ. လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ ခါးက ကုန်းလာတယ်၊ အစပိုင်းတော့ ခါးက မတ်မတ်နဲ့ပဲ လမ်းလျှောက်နေပြီး နည်းနည်းနာလာတဲ့အခါမှာ...
လမ်းလျှောက်တိုင်း တင်ပါးနေရာ နာခြင်း
မေး. လမ်းလျှောက်ရင် တင်ပါးနေရာက နာနာနေတာ ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲခင်ဗျာ။ သုသု (FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. တင်ပါးနာတယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး စဉ်းစားရမှာက ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရခဲ့သလားဆိုတာကိုပါ။ ဖင်ထိုင်ရက်လဲကျခဲ့သလား၊ ချော်လဲလား၊ အရင်တုန်းက ဒဏ်ရာရဖူးပြီး အခုမှ...
နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ခြင်းက ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းထက် ကယ်လိုရီ ခြောက်ဆ ပိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်
၊ လရိပ်မေ ၊ အချိန်ပေးတာချင်းတူရင်တောင် ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်တာထက် နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်တာက ကိုယ်အလေးချိန်ကို ပိုလျော့ကျစေပါတယ်။ – နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်တာက ပိုထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ခါးနဲ့ခြေသလုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြေ လျော့နည်းပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ပိုသန်မာစေပြီး ဟန်ချက်ပိုထိန်းနိုင်ပါတယ်။ – ဘာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျရသလဲ နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်တာက...
လမ်းလျှောက်တာက အလွယ်ကူဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား။ လမ်းလျှောက်တာကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေက- – စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေပါတယ်။ – ဆေးလိပ်ပြတ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ – နှလုံးကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ – ခြေထောက်ကိုနှိပ်နယ်ပေးသလို သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်။ – ကြွက်သားတွေကို...
နံနက်စောစော တစ်နာရီလမ်းလျှောက်ပေးရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ရရှိမှာလဲ . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မနက်ခင်းမှာ တစ်နာရီလောက်စောစောထပြီး လမ်းလျှောက်ပေးရင် သင့်တစ်နေ့တာ ဘ၀မှာ သိသာတဲ့ ကောင်းကျိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ – နှာချေတာ သက်သာနိုင်ပါတယ် မနက်အိပ်ရာထတိုင်း နှာချေနေရင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ မနက်စောစောထပြီး လမ်းလျှောက်ပေးတာကြောင့် စွမ်းအင်ပိုရရှိပြီး ပိုမိုအပန်းပြေကာ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းနေပါလိမ့်မယ်။...